Qaamuuska kumbuyuutarka (HIJ) | Ragga Stylish
Qaamuuska kumbuyuutarka (HIJ)
Ragga Stylish | | La cusboonaysiiyay 28/10/2015 13:28 | Waqtiyada firaaqada, Tiknoolaji
Hacker: Qof aqoon weyn u leh nidaamyada kombiyuutarka.
Xararad: Kombuyuutar yar oo ku filan in gacanta lagu hayo ama jeeb lagu keydiyo. Qaarkood, xogta waxaa laguqori karaa qoraal gacmeed. Qaar kale waxay ku dhejiyeen kumbuyuutarro yaryar.
hardcoded: Ku saabsan doorsoomayaasha ama xogta si toos ah loogu soo galay koodhka ilaha barnaamijyada, kaas oo adkeeya wax ka beddelkooda.
Disk adag: daawo disk adag.
hardware: dhammaan qaybaha jirka ee kumbiyuutarka iyo aagaggiisa.
Hertz: hertz. Qaybta isdabajoogga U dhiganta hal wareeg ilbiriqsi kasta. Xisaabinta waxaa loo isticmaalaa in laga siiyo fikrad xawaaraha processor-ka, taasoo muujineysa inta jeer ee saacaddiisa (eeg).
Xaragada: qoraallada isku xidhan. Adoo gujinaya jiirka, isticmaalaha wuxuu ka guurayaa hal qoraal oo kale, kuna xiran kii hore.
Hologram: Sawir saddex-geesood ah oo ay abuurtay saadaal sawir leh.
Marti gelinta: eeg martigelinta websaydhka
Guryeynta: Adeeg hoy. Asal ahaan waxay ka kooban tahay iibinta ama kireysiga meel muuqaal ahaaneed oo ku taal xarunta xogta si markaa macmiilku u dhigo kombuyuutarkooda halkaas. Shirkaddu waxay ku siinaysaa awoodda iyo isku xirka internetka, laakiin kombiyuutarka kumbuyuutarka waxaa si buuxda u doorta isticmaalaha (illaa qalabka).
HTML: Luqad Calaamadeysan Hyper Text. Luqadda barnaamijka si loo dhiso bogagga shabakadda.
HTTP: Hab maamuuska Wareejinta Hypertext. Borotokoolka wareejinta Hypertext. Waa hab maamuus u oggolaanaya wareejinta macluumaadka feylasha qoraalka, sawirada, fiidiyowga, maqalka iyo kheyraadka kale ee warbaahinta.
Bogga: Daboolka bogga.
Hub: Isku uruurinta Aaladda sida caadiga ah loo isticmaalo in loo yaqaan 'topology star' oo ah barta dhexe ee shabakad, halkaas oo dhammaan isku xidhka aaladaha shabakadaha kaladuwan ay isugu yimaadaan.
Ishabakadda: Internetka guud ahaan waxaa lagu qeexaa inuu yahay cas ee shabakadaha caalamiga ah. Shabakadaha qeyb ka ah shabakadan waxay ku wada xiriiri karaan hab maamuus la yiraahdo, TCP / IP (Nidaamka Xakamaynta Gudbinta / Protocol-ka Internetka). Waxaa uureeyay dabayaaqadii 1960s Wasaaradda Difaaca Mareykanka; si hufan, by ARPA. Markii hore waxaa loogu magac daray ARPANET waxaana loogu talagalay in lagu fuliyo howlaha baaritaanka. Isticmaalkeedu wuxuu caan noqday ka dib abuuristii WWW. Hadda waa goob fagaare ah oo ay u adeegsadaan malaayiin dad ah adduunka oo dhan aalad isgaarsiineed iyo macluumaad.
Internetka: Intranets waa shabakadaha shirkadaha adeegsada hab maamuuska iyo aaladaha internetka. Muuqaalkiisu wuxuu lamid yahay kan bogagga internetka. Haddii shabakadani ay lafteeda ku xiran tahay internetka, waxaa guud ahaan lagu ilaaliyaa gidaarrada.
ICQ (// 'Waan Ku Raadinayaa //): Barnaamij u oggolaanaya asxaabta iyo xiriirada inay ogaadaan in mid ka mid yahay khadka tooska ah. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad dirto fariimo iyo feylal, samee // sheeko //, sameyso xiriir cod iyo muuqaal, iwm.
IEEE: Machadka Injineerada korantada iyo korantada - ururka weyn ee farsamo yaqaanada iyo xirfadlayaal, fadhigooduna yahay Mareykanka. Waxaa la aasaasey sanadkii 1884 halka 1998 ay ku dhowaad 320.000 xubnood ka ahaayeen 147 dal. Waxay door bidaa cilmi baarista dhinacyada kaladuwan, sida tikniyoolajiyadda hawada, xisaabinta, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda noolaha. Waxay kor u qaadaysaa jaangooyooyinka caadooyinka.
Daabacaadda jet Ink: Daabac ku shaqeeya buufinta khadka warqadda.
Dot matrix ama daabacaadda matrix: Daabacad ku shaqeeysa madaxa ku riixaya xarig qalin ah warqadda.
Daabacaha laser- Daabacaad deg deg ah, xallin sare leh adoo adeegsanaya tikniyoolajiyadda leysarka. Hillaacdu markay ku dhufato warqadda, waxay samaysaa sawir koronto (electrostatic) ah oo soo jiita khadka qalalan.
Daabac: aaladda durugsan oo dib u soo saarta qoraalka iyo sawirada warqad ku qoran. Noocyada ugu waaweyni waa: jaantuska dhibic, jet khad, iyo leysar.
Sirdoonka caanka ah: jilitaanka hababka sirdoonka aadanaha, iyadoo la adeegsanayo nidaamyada kombiyuutarka.
Is-dhexgal: Kala guur ama shey isku xira oo sahlaya isdhaafsiga xogta. Kumbuyuutarka, tusaale ahaan, waa is-dhexgal u dhexeeya adeegsadaha iyo kumbuyuutarka.
IP: Hab maamuuska Internetka.
IrDA (Ururka Xogta Infrared): Ururka waxaa loo aasaasay si loo abuuro halbeegyo caalami ah oo loogu talagalay qalabka iyo softiweerka loo isticmaalo isku xirka xiriirka infrared Tikniyoolajiyadda rayra ee infrared-ka ayaa door muhiim ah ka ciyaara isgaarsiinta wireless-ka.
ISDN: Adeegyada Isku-dhafan ee Shabakada Dijital ah: Nidaamka loogu talagalay gudbinta taleefanka dijitaalka ah. Khadadka ISDN iyo adabtarada ISDN waxaa suurtagal ah in lagu duubo Webka xawaare dhan 128 Kbps, illaa iyo inta ISP ay leedahay ISDN.
ISO: Ururka Caalamiga ah ee Jaangoynta. Waxaa la aasaasay 1946, waa federaal caalami ah oo mideeya heerarka qiyaastii XNUMX waddan. Mid ka mid ah waa heerka OSI, tusaalaha guud ee tixraaca hab maamuuska isgaarsiinta.
ISP: Adeeg bixiyaha internetka.
Galinta (gelinta xogta): Waxaa loola jeedaa macluumaadka la helay ama habka loo helo macluumaadka. Waa macluumaadka uu soo saaray adeegsadaha ujeeddadiisu tahay inuu xakameeyo barnaamijka kombuyuutarka. Isku xirnaanta adeegsadaha ayaa go'aaminaya noocyada wax soo gelinta ee barnaamijku aqbalayo (tusaale, teeb garaacid, qasabno muus, iwm). Gelinta sidoo kale waxay ka imaan kartaa shabakadaha iyo aaladaha kaydinta.
diir: bu'da ama qaybta lagama maarmaanka u ah a nidaamka hawlgalka. Waxay bixisaa adeegyada aasaasiga ah ee nidaamka intiisa kale.
ereyga muhiimka ah: keyword wixii raadinta ah.
kiilo: 1.024 jajab.
kilobyte (KB): halbeegga cabbirka xusuusta. l kilobyte = 1024 bayt.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Qaamuuska kumbuyuutarka (HIJ)
Qaamuuska Kumbuyuutarka (LMNO)
Cryptorchidism, maxay ku saabsan tahay?